सन्दिप र राशिदलाई समेत उछिन्ने नेविसंघका ‘बलर’ सामाजिक संजालमा भाइरल
काठमाडौं। हिजोदेखि सामाजिक संजालमा दुई फोटो निकै भाइरल छन् । यी दुवै फोटो अलाइनखबर डटकमका पत्रकार चन्द्र आलेले खिचेका हुन् । यी फोटोमा नेविसंघका कार्यकर्ताले ढुंगा हानिरहेका छन् । नेविसंघमा ३२ वर्षको उमेर हद राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा विवाद…
लुट्न सके लुट बोलको गीतलाई नयाँ शक्तिको समर्थन
काठमाडौं । देशमा बढ्दै गएको वेथितिविरुद्ध लोक गायक पशुपति शर्माले गाएको ‘लुट्न सके लुट कान्छा लुट्न सके लुट’ बोलको गीतलाई डा बाबुराम भट्टराइको दल नयाँ शक्ति पार्टी नेपाललले समर्थन गरेको छ । नयाँ शक्ति पार्टीले गायक शर्माको गीतको लिंक सहित…
सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्दै हुनुहुन्छ ? १५ लाख जरिवाना र ५ वर्ष जेल सजाय हुनसक्छ
–कुमार चौलागाईं काठमाडौं। सरकारले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा कडाइ गर्ने भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरी सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएको ‘सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा सामाजिक सञ्जाल नियमनमा कडाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक सञ्जाल…
३ विदेशीले सुरिलो स्वरमा गाए नेपाली लोकगीत, भिडियो रातारात भाइरल
काठमाडौं। यो साता एउटा भिडियो सामाजिक संजाल फेसबुकमा निकै भाइरल भयो । भाइरल इन नेपाल नामको फेसबुक पेजमा पोस्ट भएको यो गीतमा ३ विदेशीहरुले नेपाली लोकगीत गाइरहेका छन् । ३ जनामध्ये एक महिलाले बाँसुरी बनाएकी छिन् ३ पुरुषले सानो गितार…
ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे मिचेल ओबामा !
काठमाडौं । ‘भ्यालेन्टाइन डे’ अर्थात प्रणय दिवस नेपालसहित विश्वभर बिहीबार मनाइँदैछ । विशेष गरी युवा युवतीले यसलाई उत्सवकै रुपमा मनाउने गर्दछन् । यस दिन प्रेमी प्रेमिकाले एक अर्कालाई विभिन्न उपहार दिएर माया दर्शाउने तथा आफूलाई मन परका व्यक्ति समक्ष प्रेम…
'भ्यालेन्टाइन्स डे'मा सबै प्रेमीहरुका लागि रवीन्द्र मिश्रको एउटा कविता
काठमाडौं । नयाँ पुस्ताले प्रेम साटासाट गर्दै आज भ्यालेन्टाइन्स डे मनाईरहेका छन्। फ्रेब्रुअरी १४ मा विश्वभर मनाइने प्रेम दिवस अर्थात् भ्यालेन्टाइन्स डे नेपालमा पनि युवा पुस्ताले मनाइरहेको छ। भ्यालेन्टाइन्स डेका अवसरमा पूर्व पत्रकार एवं विवेकशिल साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले सामाजिक…
मुस्ताङमा रमाउँदै नेपाली र अमेरिकी सेना
काठमाडौं । भारी हिमपात जारी रहेको मुस्ताङमा नेपाली र अमेरिकी सेनाको संयुक्त टोली पुगेको छ । संयुक्त सैन्य अभ्यासका लागि फौज त्यहाँ गएको हो। नेपाली सेनाले उच्चहिमाली क्षेत्रमा मानवीय उद्दारका कार्यको अभ्यासका लागि दुई देशका सेनाको संयुक्त अभ्यास गरिएको जनाएको छ।…
गैँडामाथि चढेको युवकको फोटो भाइरल भएपछि निकुञ्जले सचेत गरायो
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा गैँडामाथि एक युवक चढेको फोटो भाइरल भएपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले उक्त युवकलाई सचेत गराएको छ। रत्ननगर नगरपालिका–६ स्थित सौरहाका १४ वर्षीय अनुप महतोलाई शुक्रबार सचेत गरी तारिखमा छाडिएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी गोपाल घिमिरेले सञ्चारमाध्यमलाई बताएका छन्। जनाएको…
विदेशबाट फर्कनेलाई विमानस्थलमा कडाइ गर्न लागेपछि रेखा थापा आक्रोसित
काठमाडौं । सरकार पछिल्लो समय विदेशबाट हवाइ यात्रुले ल्याउने सामानमा कडाइ गर्न एक्सनमा उत्रेको छ । धेरै समय अगाडि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएका मालवस्तुमा पूर्ण वा आंशिक रूपमा भन्सार महसुल छुट दिन सक्ने प्रावधानको कार्यान्वयनमा सरकार उत्रेको हो । गत…
सोसल मिडियामा भाइरल बनेको यो तस्बिर
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा पछिल्लो समय एउटा तस्विर निकै भाइरल बनेको छ। उक्त तस्विरमा बच्चाहरुले सेल्फी लिइरहेको कल्पना गर्दै खुसी भइरहेको देख्न सकिन्छ। यो तस्बिरलाई फोटो अफ द डे, बेस्ट सेल्फी, ह्याप्पीनेसजस्ता शब्द प्रयोग गरेर सेयर गरिँदै छ। यतिमात्र होइन,…
Newer 1234Older Last ›
सात दशकसम्म नसुध्रिएका दल र जनअपेक्षा
वैज्ञानिक नारायण घिमिरेसंगको संक्षिप्त कुराकानी
शीर्ष नेतालाई प्रश्नः किन लुक्यो रअ प्रमुखको भेट ? (भिडियो ब्लग)